Nkịtị ntutu ntutu ewu ewu ịchọ mma ọkachamara 15pcs ejiri osisi rụọ etemeete ahịhịa setịpụrụ onye nrụpụta na ndị na -ebubata ya Dongmei
Okpokoro ntutu ewu ewu ịchọ mma ahịhịa ọkachamara 15pcs ojii osisi etemeete ahịhịa setịpụrụ
Ejiri ajị anụ etemeete ọkachamara 15pcs mee ajị ewu, ọla kọpa na aka osisi. Ewu ewu dị nro na -adịkwa larịị, nweekwa ntụ ntụ siri ike. Ụdị njikwa aka dị elu bụ nke na-anaghị amị amị, njigide siri ike, ọ gaghịkwa enwe ike ọgwụgwụ mgbe ejiri ya mee ogologo oge. Nhọrọ kacha mma maka ndị na -ese etemeete!
- A zuru ezu mma Setịpụrụ nke brushes etemeete ọkachamara 15pcs, ha niile mara mma nke ukwuu na ahịhịa ahịhịa mara mma maka idobe brushes gị n'aka, n'ụlọ ma ọ bụ mgbe ị na -eme njem.
- EGO dị elu dị elu:Na osisi dị mma na rose gold ferrule na ngwakọta. Ọkụ na ntụsara ahụ, n'agbanyeghị ogologo oge ị na -eji ahịhịa, ike agaghị agwụ gị. Na-enweghị mmịfe, njigide siri ike, ị nwere ike rụọ ọrụ nke ọma na brushes etemeete dị iche iche, na-enye gị ahụmịhe ngwaahịa kacha mma.
- Onyinye zuru oke:Ị gaghị echetụ n'echiche ihe nchacha etemeete etemeete a bụ nke ụmụ nwanyị na -ewu ewu. Ma enyere ya onwe gị ma ọ bụ dị ka onyinye nye ndị enyi nwanyị gị, ọ ga -eme ka ndị mmadụ tie mkpu, ụmụ nwanyị niile chọrọ ịma mma Ọ bara uru ụdị onyinye a dị oke ọnụ ahịa.
Aha ngwaahịa Okpokoro ntutu ewu ewu ịchọ mma ahịhịa ọkachamara 15pcs aka osisi ojii etemeete ahịhịa setịpụrụ
Ihe ntutu Ntutu ewu
Ihe Ntutu ewu+mkpisi osisi+ferrule ọla kọpa
Oge mmepụta Dabere na ọnụọgụ gị, ihe na-erughị 2000 chọrọ ụbọchị 15-20, Ihe karịrị 2000 bụ ihe dị ka ụbọchị 20-35
Ụzọ ịkwụ ụgwọ T/T, Western Union, Paypal
*Ahịhịa ntụ ntụ na -atọ ụtọ: etemeete ntụ ntụ ahụ nwere ọnya na -acha uhie uhie, ihu etemeete dịkwa ọcha ma na -adịgide.
*Nchachi ihe: Onye isi ahịhịa mara mma nwere ike ịchacha ebe ndị siri ike iru, yana ihe na-ezobe ya na-adịkarị otu na nke eke.
*Nchachachachachachachachachachachachachachachachachacha, na -agwakọta ndò, na -eme ka ọdịdị ihu dị mma pụta ìhè.
*Eyeshadow ahịhịa: ụdị dịgasị iche iche. Ekwesịrị ịkwadebe brushes anya anya nke nha dị iche iche iji kwekọọ n'ụzọ dị iche iche na -atụgharị anya.
*Nku nku anya: Site na ntụ nkuanya, ọ nwere ike ị nweta ọdịdị nku anya mara mma. Ọ dị mfe ijikwa ike na ndo karịa pensụl nkuanya.
*Egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ: depụta kpọmkwem ụdị egbugbere ọnụ, mee ka egbugbere ọnụ jupụta ma bụrụ otu, na -adịtekwa aka.
*Ntọala ahịhịa: ejiri ya tinye ntọala mmiri mmiri, ihe achọrọ maka ahịhịa na ntọala mmiri mmiri dị elu.
*Ahịhịa contour ihu: Ihe e ji mara ya bụ na isi ahịhịa bụ 45 Celsius, nha ya yiri ahịhịa ihere, na bristles na -ebuwanye ibu.
Nke gara aga: Golden aluminom na -eji eriri sịntetik ntutu 8pcs etemeete ahịhịa set
Osote: Nri ụmụ nwoke na -agba boar kwa ụbọchị na -eji osisi osisi afụ ọnụ ajị agba
Ewu ntutu etemeete ewu
etemeete ahịhịa setịpụrụ
Dongshen ahịhịa etemeete ịtọ N'ogbe pink mara mma v ...
Dongshen kabuki ahịhịa emeputa N'ogbe na ...
Dongshen kabuki ahịhịa emeputa enweghị obi ọjọọ ...
Anyị na-emepụta maka etemeete etemeete dị elu & ụdị ịkpụ afụ ọnụ OEM na mba ndị mepere emepe na Europe na United States, na-ahazikwa mmepụta ODM maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obere, ọkara na nnukwu ndị ahịa.
Nịm etemeete ahịhịa, Mee Ncha, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ịkpụ afụ ọnụ, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete,